Uummatni Oromoo Uummata Wal Malee Mootummaa Hin Qabnedha. | QEERROO
Uummatni Oromoo Uummata Wal Malee Mootummaa Hin Qabnedha.
Posted on January 17, 2018 by Qeerroo
Seenessaa Qeerroo tiin
Uummaatni Keenya roga hundaan haala akkaan ulfaata keessatti argama, uummata keenya qe’eefi qabeenyaa isaaniirraa waraana liyyuuhayilii Somaaleefi Agaaziin irratti banameen buqqifaman haala ulfaataafi gaddisiisaa keessatti argamu. Uummatni keenya haala rakkisaafi ulfaataa akkasiin buqqifamaan
🚨-Godinalee Harargee Bahaafi Lixaa Kaambii Hammarreessaafi bakka nageenyaa isaaniif balaa ta’ee irraa qubsiifamanii kan jiran Miliyoona tokkoo ol akka ta’an mirkanaa’eera.
🚨-Godina Baalee Aanota akka Beeltoo , Dhaamoleefi Sawweenaa Walumaa galaatti uummata 30,000 olitu haala ulfaata keessatti argama.
🚨-Godina Booraanaafi Gujiittis kanneen lakkoofsaan adda hin baafamiin kumootaan lakkaawwamaan buqqifamanii haala ulfaataa keessatti kan argama ta’uun mirkanaa’eera.
🔊#Isaan armaan olii kunneen kanneen Waraanaa Daangaa irraan Loltoota Liyyuu hayilii Somaaleefi Waraanaa Agaaziin dirqisiifamanii ajjeefamaa, saamamaafi madeeffamaa buqqifaman yoo ta’u, Kanneen Oromiyaa keessa jiran kan Mootummaan Abbaa irree lafa qabeenyaa Isaanii Irraa fudhatee bakka jireenyaa dhabanii biyya abbaa isaanii keessatti akka qubattuufi baqataatti jiraachaa jiraan lakkoofsaan kumootaan lakkaawwamu.
🚨-Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Saqqaa Keessa bara 1997 A.L.H uummata Oromoo Abbootii warraa 211 olitu sababa hoongeetiin Godina Harargee Bahaafi Lixaa Irraa buqqifamee Qubsiifame. Yeroo ammaa kana abbootii warraa 211 irraa Lafti isaan irraa qubsiifaman mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin irraa fudhatamee waan ittin jiraataan dhabuun haala ulfaata keessatti argamu.
🚨– Naannawaa Finfinneefi Godinaalee Magaaloota Addaa Nannawaa Finfinnee irraa Uummatni Oromoo Kumoota Lakkawwaman Lafaafi Qabeenyaa isaanii Irraa beenyaa tokko malee buqqifamuun biyya abbaa isaanii Keessatti jiruufi jireenya baqataan jiraatuu jiraachaa jiru. Kan warruma qee’ee isaa isaa isa buqqiseef waardiyaa ta’e, kaan dhagaa Coblestone reebee jiraata, kaan immoo umriifi humna dhabuu irraa socho’ee of jiraachisuu illee dadhabee ceesee du’a eeggachaa jira.
Kanaafuu Yaa Uummata Oromoo, Oromoon wal malee homaa hin qabu rakkoo roga hundaan nutti heddummateef heddumina keenyaan wal irraa qolachuufi ciniinnannee waan dandeenyu maraan qabsootti hirmaachuu qofatu furmaata !!